Ibhola yaseTshayina eMilo eMhlophe ye-Acrylic Cream Jar ifektri kunye nababoneleli |Sengmi
Inombolo yomzekelo: A75
Ibhola eNtofontofo emile kwiJar yeCream emhlophe ye-Acrylic kwi-Stock.
I-White PP yeTanki yangaphakathi, ikhuselekile.
Kubandakanya i-Gold Screw lid kunye ne-Inner Round Gasket.
A75I-Acrylic Cream Jar
Malunga neXabiso Kuba umthengi unesicelo esahlukileyo ngokwesiko, iXabiso eliLudweyo lenzelwe kuphela ireferensi yale ngqayi, inkqubo efanayo njengomfanekiso Nceda ucacise ukuba ufuna ibe yinkqubo njani ukufumana ikowuteshini yokugqibela.
Le bhola emilise okwesibini ingqayi ye-acrylic isetyenziswa kakhulu ukugcina izinto zokuthambisa kunye neemveliso zokhathalelo lwesikhumba, ezibandakanya ikhrimu yobuso, ikhrimu yamehlo, i-lip balm, i-lip scrub, umgubo omenyezelayo, ibhotolo yomzimba, i-ointment, iisalves, blusher, imaski yodaka, njl.
Njengoko kunokubonwa kwimifanekiso, le ngqayi iqulethe umzimba wengqayi, itanki yangaphakathi, isiciko sangaphandle kunye ne-liner yangaphakathi, eqinisekisa ukuba le ngqayi inokutywinwa okuqinileyo.Ngenxa yoko, olu lwakhiwo lugqibeleleyo lunokuthintela nakuphi na ukuvuza okunokwenzeka okanye ukuchitheka kweemveliso zakho.
Le ngqayi yenziwe nge-eco-friendly, i-recyclable kunye nekhwalithi ephezulu ye-Acrylic, ekhokelela kumzimba wengqayi ejiyileyo kunye nesakhiwo esihlala ixesha elide, esinokuthi sinqande ukuphuka, ukuqhekeka okanye ukujika.
Kulula ukuodola kunye nokubonelela ngeenkonzo ezahlukeneyo
1. Uvavanyo loMthengi: Senza uvavanyo lokuvuza ngamaxesha e-3 ngaphambi kokupakisha, ukuba kuyimfuneko, samkela lonke uvavanyo lwabathengi.
2. Ukuprintwa kweleyibhile: Ukuprintwa kwesikrini/ isilika, isitampu esishushu kunye nokunye ukuphatha umphezulu.
3. Isitayela sokupakisha: Isikhwama se-Poly kwibhokisi, njengeebhotile ezi-5 kwi-poly bag kwibhokisi.
4. Isampuli: Sinako ukunika isampuli simahla kuwe ukuvavanya umgangatho.
5. Ukwenza umngundo: Sinokuvelisa iimodeli ngokwendlela yoyilo lwakho.
6. Isiqinisekiso somgangatho: Sine-1: 1 endaweni yezo zineziphene.
7. Ukuhanjiswa: Iintsuku ezi-2-3 ukuba unazo kwisitokhwe.
Ngaphambili: IJar yePlastiki yeCream engenanto eJikeleyo kabini
Okulandelayo: IJar yeDayimane eNcinciweyo yePlastiki eCream engenanto
5g Engenanto kabini Wall Acrylic Isample Jar
Ibhotile yeToner yesilwanyana, Ibhotile engenamoya eNtofontofo, Ingqayi engenamoya, Airless Black ibhotile, 60ml Airless ibhotile, Ibhotile yesirinji engenamoya,